njem njem | Otu Di na Nwunye
August 4, 2019 + Ecuador, Obodo Galapagos, Outdoors, South America
August 7, 2018 + Asia, Nhazi njem
10 Atụmatụ ịgbaso mgbe ị na-aga Bhutan maka Oge Mbụ
Na njem na Bhutan, ala ndị mọnk na ndị mọnk bụ mgbe niile na-akpali akpali. Mana ka ị na-eme atụmatụ nleta mbụ gị, ọ dị mkpa ịghọta ihe ụfọdụ, karịsịa ihe a ga-atụ anya na otu esi edozi ihe maka njem ị ga-enwe ọganihu. Nke a dị mkpa Bhutan njem Atụmatụ maka nleta ọzọ gị! Enwere ọtụtụ ebe na saịtị iji gaa na ... GỤKWUO
Mee 2, 2017 + Hotels, Nhazi njem
Ntuziaka njem 10 maka ime njem njem gị
N'ihe banyere njikere, njem nke ise gị ga-ele anya dị iche na nke mbụ gị, nke iri na ise ga-elekwa anya dị iche na nke ise gị. Ọ dị iche na anyị. Oge mbụ mụ na Tracy hapụrụ mba anyị nwere nnukwu oge, ma anyị mere ọtụtụ ihe. Anyị ji ọtụtụ ụgbọ elu mee njem. Anyị achọtabeghị ... GỤKWUO